Vagari vanosvika zviuru zviviri vemu ward 1 ne 2 mudhorobha reMasvingo vonyorera gurukota muhofisi yaVaKembo Mohadi mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika, VaDavis Marapira, tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rweMucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura reMutirikwi.
Mugwaro iri vagari ava vanoti kuvharwa kwaita mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu reMutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi VaMarapira vachidiridzira havo purazi ravo.
Vagari vanoti vakaendesawo gwaro iri kuhofisi yegurukota reMasvingo VaEzra Chadzamira pamwe ne kukanzuru yeMasvingo kuti vataurewo naVaMarapira kuti vasavharire guta mvura.
VaTerence Gutuza, mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa VaMarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyerere zvakanaka.
Vamwe vagary vanoti nekusayerera zvakanaka kwemvura, yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana pachityirwa kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauriro emumwe mugari VaMasimba Mutsvairo.
Asi VaMarapira vati kuvhara kwavakaita mvura iyi kuri kubatsira nekuti vari kurima chibage negorosi riri kubatsira kupedza nzara mudunhu reMasvingo.
Meya weguta reMasvingo VaCollen Maboke vati vakaona gwaro iri kuhofisi yavo uye vari kuda kuita hurukuro naVaMarapira nezvenyaya iyi.
Mukuru wesangano reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURRA VaAnoziva Muguti vanoti vanotambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti mumhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura.
Vagari vanoti VaMarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura VaPerrance Shiri sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo.